Rakkoon nageenya kun waggaaf ka deemaa jiru yoo tahu mootummaan nagaa kabachiisuuf yoo socho’u, warri hidhate ammoo ‘tarkaanfii fudhannee’ maqaa jedhuun jiraattonni gidduutti miidhamaa jiraachuu gabaasa keenya kanaan duraan irratti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Ogeeyyiin Siyaasaa Dhimma Nageenyaa Haala Lixaa fi Kibba Oromiyaa Maal Jedhu?
Ogeessonni gama qorannaa dhimma nageenyaa akkasumas ka siyaasaa mootummaan rakkoo keessumaa kibbaa fi lixa Oromiyaatti jiraattotarraan balaa dhaqqabsiisaa jiru kana furmaata yoo itti hin godhin akkuma biyyaattuu rakkoo nageenyaa guddaaa keessa ‘nu’ buusaa jedhu.
Kumaa Beqqelee Yuuniversitii Finfinnee Giddugala Qorannoo Nagaa fi Dhimma Nageenyaatti barataa Dooktereet Digrii waggaa afraffaati. Kumaan, Itiyoophiyaan amma akkuma biyyaatti rakkoo nageenyaa wal xaxaa keessa jirtii erga jedheen booda warri hidhatee naannoo kana keessa socho’u ummata ‘rraan gaagaa’ama geessisaa jira jedhe.
Garuu mootummaan akka qaama biyya tokko keessatti seera kabachiisuu qabuutti utuu socho’uu qabuu, dabalataanis‘cehumsa biyyattiin keessa jirtu’ gaggeessas jedhamus nageenya kabachiisuu dhiisee waan xiyyeeffannoo ammaaf hin barbaachifnerratti yeroo isaa gubaa jiraa jechuun qeeqa. Kunis biyyattii keessa fedha adda addaa ka qaban humnootni hedduun waan jiraniif furmaata rakkoo kanaa ittuu wal xaxaa gochaa adeemee jedhe Kumaan. Rakkoon jiru bu’urri isaa siyaasa waan ta’eef amma keessattuu lixaa fi kibba Oromiyaatti humni jiru kamtu kam akka tahe adda baasuun rakkisaa ta’uus dubbate.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa lixaa fi kibba Oromiyaatti nageenya kabachiisuuf, darbees warra hidhatee naannoo kana keessa socho’u waliin nagaa buusuuf waan irraa eegamu raawwateeraa gaaffii jedhus Kumaan gaafatamee ture.
Yeroo gaaffii kanaaf deebii kennu ‘mootummaan seera kabachiisuuf tooftaa ‘humnaa’ gargaaramuun ummata biratti muffii uumuu dubbate. Silaa akka ummata naannocha keessa jiraatuutti mootummaan wanna mara mariidhaan xumuruu qaba ture jechaan yaada qabus kaa’e.
*Yaadni qophii kana keessatti ka’e Sagalee Ameerikaa bakka hin bu’u.